कसरी जोगाउने खानेकुरा ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २८ पुस
हाम्रो भान्सामा दैनिक धेरै खानेकुरा खेर गइरहेको हुन्छ । सागसब्जी, फलफूल, ब्रेड, रोटी कुहिएर खेर जान्छ । यस्ता, खानेकुरालाई फाल्नुभन्दा यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।
खानेकुरा कसरी जोगाउने ?
जहिले पनि खानेकुरा आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै खरिद गर्ने गनुहोस् । जसले गर्दा खर्च पनि कम, खेर पनि जाँदैन् । खाना तयार गर्दा निश्चित अनुमान गरेर तयार गर्नुहोस् । किनकl धेरै खानेकुरा पकाउने वा त्यसलाई राखेर बासी खाने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।
कसरी जोगाउने फलफूल ?
हामी धेरैले फलफूल किनेर राख्छौं । तर, आफूले खान नपाइ ती फलहरु कुहिएर वा सुकेर नष्ट हुन्छ । त्यसैले त्यतl नै फलफूल खरिद गर्नुहोस्, जति तपाईंलाई आवश्यक पर्छ । यदि फल सेवन गर्न नपाई खराब हुन लाग्यो भने त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँक्ने होइन । बरु, त्यसलाई कुनै ड्रिक, जाम वा जेली बनाएर राख्न सकिन्छ ।
कसरी जोगाउने बासी तरकारी ?
सागसब्जी एकै पटक धेरै खरिद गरेर राख्नुभन्दा ताजा खरिद गरी पकाउनु राम्रो हो । यदि भण्डारण गरेको सगसब्जी बिग्रने अवस्था आयो भने त्यसलाई पनि फरक विधिबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो साग बासी भयो भने त्यसलाई घाममा ओइलाएर बोत्तलमा खदिलो बनाउने ।
पछि त्यसको अमिलो बास्ना आउन थालेपछि पुन: घाममा सुकाएर गुन्द्रक बनाउन सकिन्छ । मुला, गाँजरलाई अचार बनाउन सकिन्छ ।
बासी दूध कसरी प्रयोग गर्ने ?
यदि दूध बासी भयो वा धेरै भएको अवस्थामा त्यसलाई दही बनाउन सकिन्छ । दूध फाट्यो भने त्यसलाई कागतीको रस चुहाएर फेरि उमाल्ने । जब त्यसको छोक्रा र पानी छुटिन्छ, छोक्रालाई पनीर बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा भान्सामा भएका कुनै पनि वस्तु खेर जाँदैनन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, २८ पुस २०७६, ११:०३:००